၎င်းသည် 6GB RAM နှင့် Snapdragon6| ပါ ၀ င်သော Xiaomi Mi 835 အသစ်ဖြစ်သည် Androidsis ပါ
Xiaomi Mi6သည် 6GB RAM၊ 12 MPx dual ကင်မရာနှင့် Snapdragon 835 အသစ်ဖြစ်သည်
Elvis bucatariu | | Xiaomi က
နောက်ဆုံးတွင် Xiaomi ကကြေငြာခဲ့သည် မင်းရဲ့အသစ်စက်စက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပျက်နေသောဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပျက်စဉ်အတွင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၆) နာရီတွင်။ ဒီကိရိယာယူလာ ပြီးသားပေါက်ကြားခဲ့ကြသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၌တည်၏။
Xiaomi Mi6အသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၊ ဈေးနှုန်းများနှင့်အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်များကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။
1 Xiaomi Mi 6, အဓိကသတင်း
3 Xiaomi Mi6၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
4 Xiaomi Mi6၏ဓာတ်ပုံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Xiaomi Mi 6, အဓိကသတင်း
Xiaomi က Mi6ပါ ပရိုဆက်ဆာအသစ်ထည့်သွင်းရန်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း Snapdragon 835 Qualcomm သည်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အခြေခံသည် 10nm နှင့်ရှိပါတယ် 8 core နှင့် 2.45GHz အမြန်နှုန်း။ အဆိုပါ chipset ကိုလည်းယူနစ်ပါဝင်သည် ဂရပ်ဖစ် Adreno 540၎င်း၏ယခင်ထက် ၂၅% ပိုမိုမြန်သော Adreno 25 ဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်းသည်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဤအချိန်တွင်သံမဏိနှင့်aဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုကိုယ်ထည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည် 3D ဖန်ခွက် splash ခုခံနှင့်အတူရှေ့နှင့်နောက်ကျောအပေါ်။
မင်းရဲ့လက်အောက်မှာ ၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်Xiaomi Mi6တွင်ပါဝင်သည် လက်ဗွေစကင်နာ Qualcomm Sense ID သည်ကျောဘက်တွင်ရှိစဉ် 2x optical zoom နှင့်အတူကင်မရာ dual- ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ။
Xiaomi Mi6၏ dual ကင်မရာတွင်ပါဝင်သည် optical stabilization နှင့်အတူ 12 megapixel ကျယ်ပြန့် - ထောင့်မှန်ဘီလူး 4- ဝင်ရိုးပုံရိပ်နှင့် အတူတူ 12 MPx resolution နဲ့တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ရှေ့ကင်မရာသည် 8 megapixels ရှိပြီးသိုလှောင်မှုအတွက် selfie အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အတိမ်အနက်ကိုဖော်ပြပေးသည်။
Xiaomi Mi6တွင်ရှေ့မျက်နှာစာထိပ်နှင့်အောက်နှစ်ခုလုံးတွင်စပီကာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် 3.350mAh၏ထက်ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခု က galaxy S8, iPhone7နှင့် ဟွာဝေး P10.
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကပြောကြားရာတွင် MIUI အင်တာဖေ့စ်ကိုတစ်နေ့အထိအသုံးပြုနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသည့်ဘက်ထရီသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားအင်္ဂါရပ်များအနက်စမတ်ဖုန်းတွင်ရှိသည်2×2dual WiFi နည်းပညာ ပိုကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက် 6GB RAM နှင့် 128GB သိုလှောင်မှုနေရာအထိရှိသည်.
Xiaomi Mi6ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကအဲဒီလိုပဲ ၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက်နဲ့မပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်အချို့ကိုအသုံးပြုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ကြိုးမဲ့နားကြပ် သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုနားထောင်နိုင်စေရန်။
Xiaomi Mi6၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
Xiaomi Mi6ကိုတရားဝင်ကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းwillပြီ ၂၈ ရက်တွင်တရားဝင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းအရောင်လာလိမ့်မယ် ငွေရောင်အနက်ရောင်နှင့်အပြာနှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည် 360GB မော်ဒယ်အတွက် $ 64 နေစဉ်, သိုလှောင်မှုအာကာသ၏ Memory 128GB ပါ ၀ င်သည့်အတွက်ဒေါ်လာ ၄၂၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 ယူရိုပြောင်းလဲပစ်ရန်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သုံးစွဲသူများသည် 435GB Internal Memory ပါ ၀ င်သော Model အတွက်ဒေါ်လာ ၄၃၅ ကိုဖယ်ရှားရမည် ကြွေကျောခွံ.
အမြဲတမ်းလိုပဲ၊ ငွေလဲနှုန်းကသိပ်မကောင်းပါဘူး။ သင် Xiaomi Mi6ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် 450GB Memory ပါတဲ့မော်ဒယ်အတွက်ယူရို ၄၅၀ လောက်ပေးရမယ်။ သို့တိုင် Xiaomi Mi 64 သည်အခြားအဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြစ်သော Galaxy S6 ထက်စျေးနှုန်းချိုသာနေပြီးသင်အတွက်ယူရို ၃၀၀ ခန့်ပိုမိုပေးဆောင်ရပြီး၊ အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi6၏ဓာတ်ပုံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ Xiaomi က Mi 6
ဖန်သားပြင် ၅ လက်မ IPS LCD
resolution ကို Full HD 1920 x 1080 pixels (တစ်လက်မ ၄၂၈ pixels)
ကာကွယ်မှု splash ခုခံ
Processor ကို 835GHz Octa-Core Snapdragon 2.45
ရမ် RAM 6GB
နောက်ကင်မရာ F / 12 aperture + optical stabilization + phase autofocus + 1.8 MPx ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူး 12X optical zoom
ရှေ့ကင်မရာ ၂ MPx
ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း 2160FP 30FPS မှာသို့မဟုတ် 720P 120FPS မှာ
ဆက်သွယ်မှု Wi-Fi 802.11a/b/ g / n / ac + Bluetooth 5.0 + NFC + USB Type-C
GPS စနစ် ဟုတ်ပါတယ် A-GPS / GLONASS နှင့် BDS တို့ပါရှိသည်
အာရုံခံကိရိယာ ရှေ့လက်ဗွေစကင်နာ + Accelerometer + Gyroscope + Proximity Sensor + Digital Compass + Barometer
ဘက်ထရီ ၃၃၅၀mAh လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သောနည်းပညာ ၃.၅ မြန်သည်
ဆင်းကဒ် dual-SIM ကို
အရောင်များ အနက်ရောင် / အပြာရောင် / ငွေရောင်
operating system ကို Android 7.1.1 MIUI 8.0 မျက်နှာပြင်ပါသော
အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစား ၁၄၅.၂ x ၇၀.၅ x ၇.၅ မီလီမီတာ / ၁၆၈ ဂရမ်စံမော်ဒယ်နှင့်ကြွေထည်အတွက် ၁၈၂ ဂရမ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi6သည် 6GB RAM၊ 12 MPx dual ကင်မရာနှင့် Snapdragon 835 အသစ်ဖြစ်သည်
Telegram အတွက်အကောင်းဆုံးအခင်းအကျင်းများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းစရာမလို